Sida loo rakibo AceStream Linux oo aadan u dhiman isku dayga | Laga soo bilaabo Linux
Kuweenna jecel isboortiga oo aan marin u helin dhammaan kanaallada isboortiga ee hadda jira, guud ahaan waxaan la kulannaa dhibaatada ah inaan ku raaxeysano waa inaan adeegsanno bogag kala duwan oo gudbiya ciyaaraha tooska ah, badankood way codsadaan rakibi AceStream, kaas oo u muuqda inuu xoogaa adag yahay in lagu rakibo Linux.
Tilmaamahan waxaan ku bari doonaa sida ku rakib AceStream Linux adigoon ku dhiman isku dayga, siinta xalka dhibaatooyinka ugu badan ee maanta jira. Isticmaalkeeda iyo waxyaabaha aad ka hesho waa mas'uuliyaddaada guud.
1 Waa maxay AceStream?
2 Sida loo rakibo AceStream Linux
2.1 Ku rakib AceStream on Arch Linux iyo wax soo saarka
2.2 Ku rakib AceStream Ubuntu iyo noocyo kala duwan
2.2.1 Ku rakib AceStream Ubuntu 14.04 iyo derivatives
2.2.2 Ku rakib AceStream Ubuntu 16.04 iyo derivatives
Waa maxay AceStream?
AceStream Waa a madal multimedia hal-abuur leh, oo qaaday taranka maqalka ee internetka heer sare. Tan awgeed, waxay hirgelisay maamule caalami ah oo loogu talagalay soo dejinta faylasha faylalka badan, oo adeegsada teknoolojiyada ugu horumarsan ee P2P, oo damaanad qaadaya keydinta xogta hufan iyo habka gudbinta.
Barnaamijka Ace Stream wuxuu na siiyaa faa'iidooyin taxane ah oo aan ku muujin karno:
Suurtagalnimada in laga daawado baahinta khadka tooska ah ee TV-ga (TV-yada, durdurrada gaarka loo leeyahay, filimada, kartoonada, iwm.), Oo leh tayo maqal iyo muuqaal sare leh.
Dhegeyso muusikada khadka tooska ah qaab aan luminayn wax tayo ah.
Ka eeg daadka khadka tooska ah, adigoon sugin inay si buuxda u soo dejiso.
Ka eeg waxyaabaha ku jira aaladaha fog (Apple TV, Chromecast, iwm) borotokoollada isgaarsiinta sida AirPlay, Google Cast iyo kuwa kale.
Kuu ogolaanayaa is dhexgalka codsiyada kala duwan.
Sida loo rakibo AceStream Linux
Si loo rakibo AceStream ee Linux waa inaan raacnaa talaabooyin kala duwan iyadoo ku xiran hadba sida aad u isticmaasho, waxaan diirada saari doonaa Arch Linux iyo Ubuntu, laakiin waxaan rajeyneynaa mustaqbalka inaan awoodno inaan ku rakibno meelaha kale.
Ku rakib AceStream on Arch Linux iyo wax soo saarka
Sababta ugu weyn ee aan u sameeyay maqaalkan ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah ay dhibaato ku qabeen rakibida AceStream ee Arch Linux, Antergos, Manjaros iyo derivatives, sababta ugu weyn ayaa ah in pkgbuild of plugin ah acestream-mozilla-plugin Waxay bixisaa qalad marka rakibidda, xalka waa mid aad u fudud.
Waxaan dooneynaa inaan rakibno acestream-mozilla-plugin kaas oo waliba na rakibaya mishiinka acestream y xogta acestream-player- waa maxay xirmooyinka loo baahan yahay in la soo saaro AceStream oo ka socda Firefox.
Marka ugu horeysa waa inaan furnaa terminal oo aan fulino amarka soo socda:
Waxay hagaajin doontaa dhibaatada xaqiijinta ee ka hortageysa rakibidda ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka u ah rakibidda acestream-mozilla-plugin.
Kadibna waxaan fulinnaa amarka soo socda
Mararka soo noqnoqda waxaa naloo weydiin doonaa haddii aan rabno inaan rakibno ku tiirsanaanno kala duwan, waa inaan dhahnaa haa dhammaantood.
Ku rakib AceStream Ubuntu iyo noocyo kala duwan
Ku rakib AceStream Ubuntu 14.04 iyo derivatives
Isticmaalayaasha Ubuntu iyo noocyada kala duwan ee nooca 14.04, rakibaadda AceStream way sahlanaan doontaa, kaliya waxay ku qasban yihiin inay ka fuliyaan amarada soo socda barta:
echo 'deb http://repo.acestream.org/ubuntu/ trusty main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/acestream.list sudo wget -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key add - sudo apt-get cusboonaysiinta sudo apt-get rakibi acestream-full
Ku rakib AceStream Ubuntu 16.04 iyo derivatives
Kuwa u baahan inay waxyar uun la dagaallamaan waa kuwa adeegsada Ubuntu 16.04 iyo noocyada kala duwan ee maadama acestream aysan wax taageero ah u hayn qaabkan, laakiin mahadsanid tan maqaal, Waan ku guuleystey inaan rakibo.
Waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno waa inaan soo dejino oo rakibno xoogaa ku tiirsanaan ah oo aadan awood u yeelan doonin inaad kala soo baxdo bakhaarrada rasmiga ah, hubi inaad rakibto kuwa ku habboon dhismaha naqshadeyntaada:
Soo dejiso oo rakib libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_amd64.deb waxaad ka sameyn kartaa xiriirka soo socda: http://launchpadlibrarian.net/216005292/libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_amd64.deb
Soo dejiso oo rakib siday u soo bandhigeen ku-tiirsanaanta soo socota: acestream-player-compat_3.0.2-1.1_amd64.deb; acestream-engine_3.0.3-0.2_amd64.deb; acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb; acestream-player_3.0.2-1.1_amd64.deb Mid walba waad kala soo dejisan kartaa xiriirka soo socda: https://drive.google.com/folderview?id= … e_web#list
Soo dejiso oo rakib libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_i386.deb waxaad ka sameyn kartaa xiriirka soo socda: http://launchpadlibrarian.net/216005191/libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_i386.deb
Soo dejiso oo rakib siday u soo bandhigeen ku-tiirsanaanta soo socota: acestream-player-compat_3.0.2-1.1_i386.deb; acestream-engine_3.0.3-0.2_i386.deb; acestream-player-data_3.0.2-1.1_i386.deb; acestream-player_3.0.2-1.1_i386.deb Mid walba waad kala soo dejisan kartaa xiriirka soo socda: https://drive.google.com/folderview?id= … e_web#list
Markaa waa inaan ku sii wadnaa rakibaadda caadiga ah ee AceStream sidii aan ku sameyn jirnay qaybta 14.04, fur terminal oo aan socodsiino:
Xaaladaha qaarkood waa lagama maarmaan in la bilaabo adeegga acestream-engine.service, tan waxaan u fulineynaa amarradan soo socda ee ka socda galka:
systemctl waxay bilaabaan acestream-engine.service systemctl waxay awood u siisaa acestream-engine.service
Casharradan waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysan doonto borotokoolkan ballaaran ee gudbinta warbaahinta oo adeegsanaya dhammaan awooda teknoolojiyadda P2P.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo rakibo AceStream Linux oo aadan u dhiman isku dayga
Hagaag qoraalka laakiin uguyaraan archlinux oo kani wuxuu ahaa kiiskeyga waxaad ubaahantahay: "systemctl start acestream-engine.service" iyo "systemctl enable acestream-engine.service" si ay ushaqeyso.
Jawaab Julio Cesar Campos
Miyaad ka tijaabinaysay Firefox, mise waxaad isticmaaleysay biraawsar kale?
Ma jiraa qof garanaya sida loo helo si looga shaqeeyo Debian 9?
Ku soo jawaab UserDebian
Firefox oo kujira archlinux
Ma aqaano in faaladaydii hore la daabacay ... waan ku celinayaa! Waxay igu qaadataa ma garanayo inta saacadood ee aan ku fulinayo amarka xun ee ku yaal terminal-ka, iyo in aan dhigay –ma xaqiijin, aakhirkiina ma shaqayso
qoraal kale oo aan waxtar lahayn!
isku day rakibaadda Manjaro
Gacaliye inaanay kuu shaqeynaynin, si fiican ayey iigu shaqeysay aniga, si kastaba ha noqotee isku day inaad fuliso 2 amarradan:
"Systemctl wuxuu bilaabaa acestream-engine.service" iyo "systemctl wuxuu awood u siiyaa acestream-engine.service"
Waxaan ku guuleystey inaan sameeyo talaabooyinka oo dhan dhib la'aan. Laakiin markii aan isku dayayay inaan ka bilaabo adeegga terminal-ka waxay i siisay laba guuldaro;
systemctl bilow acestream-engine.service
Ku guuldareystay inuu bilaabo acestream-engine.service: Unug acestream-engine.service lama helin.
systemctl waxay awood u siisaa acestream-engine.service
Ku guuldareystay inuu fuliyo hawlgalka: Ma jiro faylka ama galka noocaas ah
Isla wixii saxda ahaa ayaa igu dhacay. terminal-ka ayaa ku amraya amarradaas aniga guuldaradaas.
Aad baad ugu mahadsantahay qoraalka! Haddii aad isticmaasho Ubuntu 16.10 64 jajab, ma awoodi doontid inaad rakibatid "acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb". Waa inay marka hore soo dejiyaan oo rakibaan xirmooyinkan:
Malaha ku tiirsanaanta kale ayaa loo baahan yahay taas oo ku jirta kaydka.
Jawaab Juan M
Qalabka loo yaqaan 'acestream-mozilla-plugin' wuxuu joojiyay ka shaqeynta Firefox 52, sida waxyaabo badan oo NPAPI ah.
Ku jawaab Miles
Ikhtiyaar kale oo aad ufiican oo fudud ayaa ah in la isticmaalo qalabka wax lagu qoro oo loo noqdo agnostic nidaamkaaga qalliinka. Adoo isticmaalaya aperroxy, waad soo saari kartaa-
Waxaan qoray cashar yar iyo qoraal, si loo fududeeyo fulinta.
Qeybta ku rakibida Ubuntu 16.04, markaad dhahdo soo dejiso oo rakib faylashaas, sidee u rakibtaa? Markaan soo dejisto oo aan soo saaro, qaar kood waa feyl libreoffice iyo kuwa kale, Ma garanayo sida "loogu rakibo" iyaga.
Waad ku mahadsantahay horay iyo salaan.
Jawaab David Martín
Ama furayaashu dib uma shaqeynayaan, ama qalad ayaa ku jira xirmooyinka, laakiin qaanso iyo manjaro macquul maaha in la rakibo.
Markaad isku dayeyso inaad rakibto ku tiirsanaanta (qwebquit) ama wax la mid ah waxay galaysaa loop mana jirto waddo.
Ma jiraa qof xalka helay?
Ku jawaab vafe
Waad salaaman tahay, rakibida qalabka Linux waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
-Ku rakib xirmada 'acestream-launcher' ee yaourt 'yaourt -S acestream-launcher' (xirmada aan doonayno inaan ku xoojino xiga ayaa si otomaatig ah loogu soo dejinayaa)
-Ku darso acestream-engine.service, waxaan galnaa terminalka oo qaabka ROOT waxaan dhigeynaa waxyaabaha soo socda
-systemctl wuxuu bilaabayaa acestream-engine.service
-systemctl waxay awood u siisaa acestream-engine.service
Waxaan dib u bilaabay kumbuyuutarka tan kadib, ma aqaano hadii ay lama huraan noqon doonto iyo in kale
-Tani waa inay kufilan tahay laakiin cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Arch waxay wax ku kiciyeen waxna ma shaqeynayaan, marka waxay raadsadeen xal ku meel gaar ah, oo ah in la soo dejiyo feyl, waa kuwa soo socda:
source: https://aur.archlinux.org/packages/acestream-launcher/ (faallooyinka)
marka la soo dejiyo, waxaan tagnaa terminal oo waxaan aadeynaa galka aan ka soo dejinay,
Waxaan sii wadaynaa inaan ku rakibno 'sudo pacman -U python2-m2crypto-0.23.0-2-x86_64.pkg.tar.xz' waana taas, waa inay tagtaa, markii ugu horreysay waligeed ma tagto sidaa darteed waxaan dhajinayaa mar labaad, markii ugu horreysay marwalba qalad ayuu ku siinayaa, intaas oo dhan
PS: cadee sudo pacman -U iyo maya -S maxaa yeelay waa xirmo maxalli ah oo laga helo makepkg
Aad baad ugu mahadsantahay xiisahaaga.
Waxaan isku dayay marar badan oo aan horeyba u aqaanay ku tiirsanaanta iyo faallooyinka xirmooyinka qalbigayga markaan ku rakibayo yaourt. Waxaan raacayaa taladaada adiga oo adeegsanaya launcher oo eegaya haddii aan nasiib leeyahay. Waan kuu sheegayaa.
Waan ku celinayaa mahadnaq
Hal wado ama mid kale ma shaqeynayo. Waxaan isku dayay xiriiriyeha aad gelisay faallooyinka, laakiin ma xallin, wuu garanayaa xiriirka, wuxuu i siinayaa ikhtiyaarka aan ku doorto barnaamijka, waxaan doortaa acestream-launcher laakiin VLC ma furmayo.
Konsol-ka wuxuu i siiyaa jawaabta soo socota.
Fayl «/usr/lib/python3.6/site-packages/psutil/init.py », xariiqa 1231, ee _send_signal
Waa inaan sugnaa wixii cusbooneysiin ah.
Cusboonaysiinta cusub kadib, jawaabta qunsulku waa kuwan soo socda.
Mashiinka Acestream oo socda.
2017-07-28 18: 16: 59,615 | MainThread | acestream | qalad inta lagu guda jiro bilowga
Faylka «core.c», safka 1590, gudaha
Faylka «core.c», safka 144, gudaha
Faylka «core.c», safka 2, gudaha
ImportError: ma soo dejin karo magaca __m2crypto
Cilad ayaa ku jirta xaqiijinta Acestream!
Ciyaaryahan Media ma soconayo ...
Waan horumarinaynaa, hadda waxay aqoonsan tahay acestream, laakiin libcrypto ayaa sii wadaya dagaalka.
Waxaan isku dayay inaan rakibo xirmada aad kugula talineyso xiriirka aad ii soo dirtay.
Oo waxay si wax ku ool ah u hagaajinaysaa dhibaatada, vlc wuu furmayaa oo Acestream wuu shaqeeyaa.
Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada-
Waad salaaman tahay, ka raali noqo dib u dhaca, waxay ahayd wax aad loola yaabo in aysan kuu shaqeyn markii ay shaqeysay, waxaan ku jiraa Arch plasma, waan ku faraxsanahay inay ku caawisay, taasi waa waxa aan u joogno
Qeybinta kale ee aan haysto ee ah Fedora, waxa aan haysto waa Wine kudayasho acestream ee daaqadaha xD, haddii ay dhacdo inaad tagto meel kale oo distoor ah ama isla Arch, waxa aniga iga yaabiyay ayaa ah in xitaa Debian aysan haysan xirmooyinkan ...
soosaare macaan01 dijo
Waad salaaman tihiin feylkuna waa sida loo rakibay wali waxaan ahay nin cusub, salaan
Wuxuu ku dhejinayaa faallada kor ku xusan
Shalay waxaan ku rakibay xirmo snap ah oo ku taal Kde Neon 5.8 waxaanan la yaabay sida fudud ee dhakhsaha badan ee ay ii shaqaysay. Way fiicnaan laheyd haddii aad cusbooneysiiso maqaalka maxaa yeelay ma jiro isbarbardhig, geeddi-socodka ayaa aad loo fududeeyay.
sudo apt rakibi snapd → ku rakib nidaamka maaraynta xirmada snap (haddii aadan ku rakibnayn)
si dhakhso ah u hel acestream → si loo hubiyo in aan barnaamijka ku hayno meelaha wax lagu keydiyo (dhammaan waxyaabaha ka soo baxa ubuntu waa inay lahaadaan)
sudo snap rakibi acestreamplayer
Ku jawaab chemabs
Waad saxantahay Waxaan hadda ku rakibay kubuntu 17.10, maadaama habka halkan ka muuqda gebi ahaanba aan la aqbali karin. Aad baad u mahadsan tahay
Ku jawaab antonio manzano
aan ansax ahayn naqshadaha i386
Ku soo jawaab Papito
Waxay ahayd sida kaliya ee lagu rakibo Lubuntu 16.04.4, laakiin ma jirto wado aan ku badbaadin karo feylka qaabeynta oo waxaan u baahanahay inaan isku hagaajiyo halbeegga si aan ugala shaqeeyo Serviio. Fikrado kasta oo lagu hagaajinayo?
Ku jawaab sie9k
Qoraal aad ufiican. Bog websaydh ah oo qasab ah oo aqrinaya Linuxni-ku cusub.
Peter rookie ah dijo
Sideed ugu rakibi laheyd AntiX 16 (waa qeybinta Linux)?
Waxaan isku dayay sida Arch Linux iyo waxyaabo kale, laakiin waxaan ahay qof cusub oo ay tahay inaan qalad ku helo
Ku jawaab rookie peter
Waad salaaman tihiin, oo ay la socdaan xirmooyinka 'sna', kaas oo asxaabta kor ku xusan faallo ka bixisay faallo ka fududaatay kaliya qaybintaan laakiin dad badan. Qaybinta la jaanqaadaysa xirmooyinkaan ayaa halkan ah:
Debian ahaan waxay noqon doontaa sidan soo socota:
-sudo rakib snapd
-sudo snap snap rakibi
-sudo snap rakib acestreamplayer
In Arch iyo deriska:
-sudo pacman -S dhaqso
-sudo systemctl awood - hadda snapd.socket
Arch (plasma) waa inaan dib u bilaabo si baakadaha la rakibay ay u muuqdaan, haddii aysan muuqan waxaad horey u ogtahay waxa la sameeyo.
On ubuntu iyo derivatives Waxaan u maleynayaa inay la mid noqon doonto lammaanaha ku rakibay kor xagga faallooyinka ee leh KDE neon.
Waa wax lala yaabo in Gnome iyo Debian-ka ay umuuqdaan kuwo aad u foolxun oo aan si fiican ula qabsanayn GTK laakiin plasma-ka Arch si fiican ayey u dhexgashaa, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu arko meel ka baxsan bilicsanaanta.
tani miyey kugu rakibaysaa acestream-engine?
Waad salaaman tahay, maya, ma rakibto, umana baahna, xirmooyinka snap-ka ah ee ku tiirsanayaasha oo dhan waa la daboolay, waa inay shaqaysaa haa ama haa.
Nabade Alejandro, fiiri haddii aad i caawin karto
[txuber @ manjaro ~] $ sudo systemctl enable --now snapd.socket
Waa lagu guuldareystay in la xoojiyo unugga: Faylka qeyb \_ xe2 \_ x80 \_ x93now.service ma jiro.
Ku jawaab txuber
Waad salaaman tihiin, Manjaro ma ahan wax saafi ah Arch wax walbana wey yara badali karaan, horeyba waa loo awoodsiin karaa loomana baahna in sidaas la yeelo, waxaan u maleynayaa inaad horeyba isugu dayday inaad ka boodo talaabadaas ...
Marka la rakibo maxaa la sameeyaa? Sababtoo ah AE-player lama rakibin, Ma aqaano sida looga dhigo inay shaqeyso.
Qofbaa i caawiya fadlan?
Haddii waxa aad rakibtay ay yihiin 'acestream-launcher', markaad gujiso xiriirka 'acestream' ayaa ku weydiin doona dalabka aad rabto inaad ku furto xiriirka, waxaad u sheegaysaa taas VLC, tanina waa tan qaban doonta shaqooyinka ace-player
Salaan. Marka hore, aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada. Waan faalleeyaa. Waxaan ku rakibay xirmada 'acestream snap snap' Debian 9 oo leh gnome. Markaan ku suganahay arenavisión, oo ah waxa aan u doonayo, waxaan dhajiyaa isku xidhka 'acestream link' daaqad ayaa ii muuqata taas oo i siinaysa laba ikhtiyaar, tan hore waa acestreamengine oo haddii aan dhagsiiyo tan aan waxba qabanayn tan labaadna waxay tahay xulasho codsi kale, waan siinayaa in la doorto laakiin codsiyada la rakibay ma furna, galka gurigeyga ayaa furmaya, marka ma garanayo sida loo xusho vlc-ka.
Iyada oo loo yaqaan 'acestream-launcher' sifiican uma socoto, waxaad sifiican ugu rakibtaa xirmada 'Snap' sida aan ugu sharaxo faallooyinka kore.
Waxaan isku dayaa inaan rakibo xirmada snapd-ka, laakiin iima oggolaaneyso:
sudo apt rakibo snapd
E: Xirmada snapd-ka lama helin
Aad baad u mahadsan tahay, waa mid ka mid ah barnaamijyadii aan ku isticmaali jiray daaqadaha waxaanan doonayay inaan ku haysto linux
Mahadsanid Chemabs iyo Alejandro! Ku habboon Ubuntu 17.10
Snap ka hel acestream
Waxyaabaha cajiibka ah ayaa ah inaad aado bogga rasmiga ah waxayna kuu soo diraan boosteejo ku saabsan mawduucooda laga bilaabo 2014! Oo ay kaliya ku sheegaan ilaa Ubuntu 13.04!
wanaagsan, sida ay ku yiraahdaan faallooyinkii hore waxay u shaqeysaa sifiican oo leh snapd qaanso:
sudo systemctl awood snapd.socket
oo diyaar ah:
Ku jawaab marco barria
hello, oo ma waxaa jira dariiqo lagu rakibo qulqulka 'ace stream' oo aan loo baahnayn inuu noqdo barnaamij-bixiye ... sida lagu sameeyo daaqadaha
Ku jawaab mchavez